ခိုးယူခံရတဲ့ iPhone ကိုသုံးလို့ရလား။ | ငါက Mac ပါ
ခိုးယူခံရတဲ့ iPhone ကိုသုံးလို့ရလား။
အသုံးချ | | iPhone ကို, NOTICIAS
ကံမကောင်းစွာပဲငါတို့ဇာတိပကတိ၌တစ် ဦး ၏ခိုးမှုခံစားခဲ့ရသူအပေါင်းတို့သည် iPhone ကို ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ် ထပ်၍ မေးလျှောက်ကြ၏။ သင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား iPhone ကို iCloud နှင့်သော့ခတ်ထားသလား။
အကယ်လို့သင်ဟာ iPhone ကိုခိုးယူဖူးတယ်ဆိုရင်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကတကယ်တမ်းအဲဒါကိုထပ်သုံးလို့ရမလားလို့သင်စဉ်းစားမိနိုင်တယ်
သူတို့သည်သင့်ကိုခိုးယူရန်အမှန်ပင်ဖြစ်သည် iPhone ကို သင့်မှာတစ်ခုသာရှိရမယ်။ ကံမကောင်းတာကနေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုခိုးယူတဲ့သူများစွာရှိပါတယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်းသည်စီးပွားရေးတန်ဖိုး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းဆုံးရှုံးခြင်းသည်အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောဒေတာများဆုံးရှုံးမှုသည်များစွာကြီးမားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံးဝလိုအပ်သောအရာများထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ မည်သူမဆိုနေ့စဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုသောစမတ်ဖုန်းတွင်ဘဏ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိပ်စာများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတန်ဖိုးရှိသည့်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ထိုပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အန္တရာယ်ကျရောက်သောဒေတာများပင်ပါဝင်နိုင်သည်။
လုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ပြောကြားချက်အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း (၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက်အချက်အလက်မရှိပါ) လက်ကိုင်ဖုန်းများခိုးယူမှုအတွက်တိုင်ကြားမှု ၂၇၉၀၀၀ ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်ညီမျှသည် နှစ်မိနစ်တိုင်းမိုဘိုင်းခိုးမှု !! ဤအအေးခံနံပါတ်များဖြင့်အမြဲတမ်းအကြံပြုထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများမိတ္တူကူးထားခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများခိုးယူခံရခြင်းကိုကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးလောက်အောင်ကံကောင်းသူတွေကသူတို့ရဲ့လူအများသိသည်ကိုရှင်းနေပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအားလုံးသည်သူတို့၏အရင်းအမြစ်များကို၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတတ်နိုင်သမျှလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းအောင်မြင်ပြီဟုသင်ထင်ပါသလား။
အသုံးပြုသူများသည် iPhone ကို၎င်းသည်စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမို၍ အေးဆေးစွာရှူရှိုက်မိသည် iOS 7“ Find my iPhone” အပလီကေးရှင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်အတွက်မူကွဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်အသေးစိတ်နှင့် login လုပ်ရန်တောင်းဆိုထားသည်။ Apple က ID ကိုနှင့်ငါတို့ iPhone ကို သူတို့လုံးဝလက်လှမ်းမမှီခဲ့ကြဘူး, သူတို့တည်ရှိမဟုတ်ခဲ့လျှင်, တစ် ဦး အသေးအဖွဲမကောင်းသောအအဖြစ်, သူခိုးကဘယ်တော့မှမသုံးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ခိုးမှုရှိပါတယ် iPhone ကို? ကံမကောင်းပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကိုမေးသောအခါဤအချက်မှာကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုခိုးယူသူသည်ကျွန်ုပ်၏ Apple ID မပါပဲထပ်မံအသုံးပြုနိုင်သည်။ သော့ဖွင့်ရန်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်မရေမတွက်နိုင်သော "လှည့်ကွက်" များကို run သည် iPhone ကို သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ဒ်များ၊ သို့သော်မည်သူမျှသက်သေမပြနိုင်ပါ။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်ပေါ်တွင် SMS သို့ပို့ခြင်းပါဝင်သောလိမ်လည်မှုနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့ကအမှု၌ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။ iPhone ကို တစ် ဦး အကြံပေးခိုးယူ iPhone ကို (၎င်းကိုအိုင်ပက်ဒ်တွင်လည်းအသုံးပြုသည်) ၎င်းကိုသင်ရှာရန် iCloud ကိုချိတ်ဆက်ထားသော link တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple ID နှင့်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်လိုသည်။ iCloud ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးသတင်းအချက်အလက်မရတဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာ phishing လို့ခေါ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူခိုးတွေကဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးရောင်းချနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ID နဲ့စကားဝှက်ကိုရယူခဲ့တယ်။ ထာဝရပျောက်ဆုံး
တစ်ခုခုကိုလမ်း, ငါတို့ဆုံးရှုံးသောနေ့သို့မဟုတ်ငါတို့ iPhone ကိုiTunes မှအစီအစဉ်များနှင့်အချက်အလက်များ၏ streaming နှင့် backup ကော်ပီများတွင်ဓာတ်ပုံများရှိခြင်းသည်နာကျင်မှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်သာစေသော်လည်းမည်သည့်အရာကမျှမကျေနပ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ပြီးတော့အသစ်စက်စက်စာဝှက်စနစ်နဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေရှိနေတာတောင်သူတို့ဟာကျွန်တော့်ကိုသုံးလို့ရမလားမသိဘူး iPhone ကို ဒါမှမဟုတ်သူတို့မသုံးနိုင်ဘူးဆိုလျှင်ခိုးယူခြင်းသည်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသလား iPhone ကို?.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iPhone ကို » ခိုးယူခံရတဲ့ iPhone ကိုသုံးလို့ရလား။
ကျွန်ုပ်၏ Iphone X ကိုမည်သူမဆိုခိုးယူသူသည်တယ်လီဖုန်းများပြုပြင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအိမ်များသို့အကြွေအနည်းငယ်ရောင်းရန်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
AirPort စက်ပစ္စည်းများသည် Apple Store သို့ပြန်သွားသည်
Life က Strange ပါ။ အချိန်ခရီးသွားခြင်းအပေါ်အခြေခံတဲ့ဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုက Mac ကိုရောက်လာတယ်